Safaaradda Mareykanka uu ku lahaa Magaalada Muqdisho oo oo dib u howl bilowday. - Latest News Updates
Safaaradda Mareykanka uu ku lahaa Magaalada Muqdisho oo oo dib u howl bilowday.
Mareykanka ayaa dib u furay safaaraddii ay ku lahaayeen dalka Sooomaaliya ka dib kolikii muddo 30-sano ah ka hor ay magaalada Muqdisho ka daadgureysteen shaqalihii iyo diblomaasiyiintii ka joogay dalka.
Hadal maalinimadii shalay ka soo yeeray Safaaradda ayaa lagu sheegay in furitaanka Safaaradda ay daba socoto ka dib markii sanadkii tagey la sameeyay dibolomaasiyiin Mareykan ah oo si joogto ah uga howlgala magaalada Muqdisho.
Safiirka Safaaradda Mareykanka ee Soomaali Donald Yamamoto ayaa sheegay in dib u furidda safaaradda ay tahay mid taariikhi ah iyo tallaabo kale oo loo qaaday xagga horumarka iyo xojinta xiriirka dibilomaasiyadeed.
Mareykanku waa isbaheysiga ugu muhiimsan ee la dagaalama kooxaha argagixisada ee ka dagaalama gudaha dalka Soomaaliya,waxaana sidoo kale uu ka mid yahay dalalka ugu weyn ee kaalmooyinka dhaqaale u fidiya dowaladda Federaalka ee Soomaaliya.